Espaina: An’aliny ireo vahoaka nirotsaka an-dalambe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2011 19:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Magyar, Español, Aymara, Ελληνικά, Italiano, polski, Português, македонски, 繁體中文, 简体中文, English
Tsy nifarana teo io. Narahana fitorevahana am-pilaminana ilay fihesikesehana tamin'ny 16 May, nahitàna olona anjatony nilasy teo amin'ny kianjaben'i Madrid, la “Puerta del Sol.” Ilay hetsika, notarihana sy narindran'ny fikambanan-jatovo Democracia Real Ya [es], dia tena faran'izay navitrika tokoa teo anivon'ny aterineto.
Ignacio Escolar dia mitatitra ao amin'ny Público [es] :
Periodismo Humano [es] mitatitra hoe:
Ireo mpampahalala vaovao mahazatra toy ny ABC dia nanao fampifanantonana toy izay ihany:
Mba hamaritan-dry zareo ny tetikadiny, ny tanjona ary ny sehatra araka ny lalàana, ireo mpanao fihetsiketsehana dia niantehitra tamin'ny fanampian'ireo mpahay lalàna fanta-daza ao Espaina. David Bravo (@dbravo) sy Javier de la Cueva (@jdelacueva) dia nifampizara torohevitra araka ny lalàna [es] mikasika ny zo hanao fikambanana sy fivoriana [es].
Maro ireo fitorevahana nolazaina hatao androany (18 May) manerana ny firenena. Ny vohikala Democracia Real Ya [es] dia tsy azo nidirana ny andron'ny 17 May, toa hoe hono noho ny habetsahan'ireo mpitsidika, saingy ireo mpampiasa dia nifandamina ary nifampizara ny toerana misy ny hetsika tamin'ny alalan'ny Facebook sy Youtube. Ny iray manaraka: Talata 17 May amin'ny 8 ora alina.
Ny fanentanana dia azo arahana koa amin'ny fampitàna mivantana na ‘live streaming’.